RW Kheyr oo safar deg deg ah ku tagaya Dhuusamareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. RW Kheyr oo safar deg deg ah ku tagaya Dhuusamareeb * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Ardaan Yare on 21st December 2019
Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maalmaha soo socda ku wajahan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug.
Diyaarad sida ciidamo gaar ah ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socdo ay ka dagto magaalada Dhuusamareeb, kuwaasi oo hor dhac ah u wafdiga Ra’iisal wasaaraha ee ku wajahan Dhuusamareeb sida la sheegay.
U jeedka Khayre ayaa lagu sheegay u kuur gelida siday u socdaan howlaha geedi socodka dhismaha maamulka Galmudug iyo soo xulista Baarlamaanka labaad ee maamulka Galmudug, kuwaas oo dooran doono guddoomiyaha Baarlamaanka, madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa.
Horey Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa tiro laba jeer ah uu tegay Dhuusamareeb,isaga oo wada-hadallo la yeeshay hoggaanka Ahlusunna oo saluugsanaa habka dowladda u wado dhismaha Galmudug walow markii dambe la xaliyey.